ओलीमाथि यसरी खनिइन अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणतन्त्रमाथि हमला गरेको भन्दै दिइन यस्तो संज्ञा — Sanchar Kendra
१यस्तो देखियो काठमाडाैंमा प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेको शक्ति प्रदर्शन, १६ तस्वीरमा हेर्नुहोस
२प्रचण्ड-नेपालको शक्ति प्रदशनपछि ओलीले भने- जनप्रदर्शन कस्तो हुन्छ २३ गते देखाउँछौं
३हामीले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न सकेनौँ, अब यस्तो हुन दिन्नौ- प्रचण्ड
४वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेस
५सर्वोच्चकाे बहसमा खैलाबैला मच्चिएपछि ओली सरकारले रातारात गर्यो यस्तो किर्ते काम, अब के गर्लान प्रधानन्यायाधिस जबरा ?
६महान्यायाधिवक्ता खरेलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र इजलासमा पेस
७सवारी साधनको नयाँ लाइसेन्स बनाउन चाहनेहरुलाई खुसीको खबर, हट्यो कोटा प्रणाली
८प्रचण्ड-नेपाल समूहको आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन, क-कसले गर्दैछन सम्बोधन ?
९बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दै, मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुने
१०खुलेको केहि दिनमै बन्द भए विद्यालयहरु, सामाजिक विकास मन्त्रीले गरे यस्तो अपील
११अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कति पाउनेछन् तलब, कस्ता हुनेछन् सुविधा-भत्ता ?
१२२५ वर्षीय समृत खरेलले सर्वोच्चमा गरेकाे १५ मिनेट लामाे बहस सुनेर न्यायाधिश दंग, किन मागियाे लिखित भर्सन ?
ओलीमाथि यसरी खनिइन अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणतन्त्रमाथि हमला गरेको भन्दै दिइन यस्तो संज्ञा
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्डमाधव समूहको नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तानाशाह भएको बताएकी छन् । प्रचण्डमाधव समूहको काठमाडौं जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै शाक्यले ओली तानाशाह भएको बातइन् ।
शाक्यले आफूहरुले त्याग र आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले हमला गरेको भन्दै उनी अहिलेको तानाशाह भएको बताइन् । शाक्यले ओली समाजवादको विरुद्धमा उभिएको आरोप लगाइन् ।
ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध निर्णयक आन्दोलनमा सम्पूर्ण काठमाडौं जुरुक्क उठ्ने भन्दै उनले काठमाडौंका जनता तानाशाह र गणतन्त्रको विरोधीको साथमा नहुने दावी गरिन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको कार्यकर्ता भेला कमलादीमा जारी छ । काठमाडौ जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल प्रमुख वक्ता छन् ।
प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण चलाएको प्रचण्ड–माधव समूहले आज पनि कार्यकर्ता भेलालाई निरन्तरता दिएको हो । सो समूहले यसअघि ६ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला र प्रशिक्षण गरिसकेको छ।
हिजो प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश नम्बर २, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा बृहत् कार्यकर्ता भेला गरेको थियो । उता केपी ओली पक्षले पनि देशभर भेला तथा प्रशिक्षण दिने क्रम जारी राखेको छ ।